မဏိရတနာ နီတိများ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤစာမျက်နှာသည် Wikiquote သို့ ကူးယူရမည့် စာမျက်နှာ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် အဆိုအမိန့်များစာရင်းတစ်ခုထက် စွယ်စုံကျမ်းဆောင်းပါးပုံစံသို့ ချဲ့ကားရေးသားနိုင်ပါက ကူညီရေးသား၍ ဤစာလွှာကို ဖယ်ရှားပါ။
မဏိရတနာ နီတိများ ကို ဘိုးရာဇာ (မြန်မာ ၇၁၀-၇၈၃)က ရေးသားခဲ့သည်။
၂ ရေ နှင့် မီး
၆ အကျိုးနှင့် အကြောင်း
၈ သတိနှင့် ဝီရိယ
၁၄ အနီးကပ် မပေါင်းအပ်သူ
၁၅ မိုက်လွန်းသူနှင့် အလိမ္မာပိုသူ
၁၉ ဆိုခဲ၊ မြဲစေ
အများလူတို့ သည်းမခံနိုင်သောအရာကို သည်းခံနိုင်မှ အကြီးအကဲ ပီသသည်။
သည်းခံခြင်းဟူသော စွမ်းအားကို ကျော်လွန်နိုင်သည့် စွမ်းအား မရှိတော့ချေ။
ရေ နှင့် မီး[ပြင်ဆင်ရန်]
မီးကဲ့သို့ကျင့်လျှင် အများကြောက်ရွံ့လေးစား ခံရမည်။ သို့သော် ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းကို မခံရရာ။
လူကောင်းလူတော်ကို ဖော်ထုတ်၍ ချီးမြှောက်ခြင်း ပြုရာ၏။
လူကောင်းလူတော်သည် မိမိအား ချီးမြှောက်သူအား အသက်ကိုပင်စွန့်၍ အကျိုးပြုတတ်သည်။
သူတော်သဖြင့် သူ့အပေါ်မှာ ကောင်းသည်ကို တွေ့ကာမျှနှင့် သူတော်ကောင်းဟု မထင်မှတ်ရာ။
အများအပေါ်၌ ကောင်းမှသာ သူတော်ကောင်းမည်ပေသည်။
အကျိုးခံစားလိုလျှင် အကျိုးဖြစ်စေမည့် အကြောင်းကို ပြုရာ၏။
အကျိုးခံစားရမည့် အကြောင်းကို မပြုဘဲ အကျိုးခံစားရန် မဖြစ်နိုင်။
အကြီးအကဲ မရှိလျှင် ပျက်စီးတတ်သည်။
အကြီးအကဲ များလွန်းလျှင်လည်း ပျက်စီးတတ်သည်။
ပညာရှိတို့ကား စိုးရိမ်သင့်သည်ကို အရာအားလျော်စွာ အခါအားလျော်စွာ သတိဝီရိယကို လက်ကိုင်ပြုသဖြင့် ဘေးရန်ဥပဒ်ကင်းကွာလျက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းလေသည်။
သူမိုက်တို့ကား စိုးရိမ်မရှိ ပေါ့တန်ဘိသဖြင့် အန္တရာယ်ရောက်လျက် အကျိုးပျက်ရလေသည်။
မိတ်ဆွေမပီသသော၊ စိတ်ပြောင်စိတ်လွယ်သော၊ သဘောထားမမှန်သောသူ အဖြစ်နှင့် အသက်တစ်ရာနေရသော်လည်း ဂုဏ်သတင်းမတည် အသက်တိုသည် ဆိုရာ၏။ မိတ်ဆွေပီသစွာ အကျိုးဆောင်လျက် သဘောထား တည်မြဲမှန်ကန်သူအဖြစ် တစ်ရက်တစ်လမျှ နေရစေကာမူ အသက်တစ်ရာနေရသူထက် သူ၏ ဂုဏ်သတင်းမှာ သားစဉ်မြေးဆက် အရှည်တည်သည်။
မဖြောင့်မတ်သော စီးပွားရှာခြင်းဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူထက် ရိုးဖြောင့်စွာ စီးပွားရှာလျက် ဆင်းရဲစွာနေရသူက မြင့်မြတ်သည်။ မရိုးမဖြောင့် စီးပွားရှာလျက် ကြွယ်ဝသူကား မကောင်းသတင်းဖြင့် ကမ္ဘာကျေသော်လည်း ဥဒါန်းမကျေ ဖြစ်ရာ၏။
စကားပြောသံကို ကြားရသဖြင့် လိမ္မာသည်၊ မလိမ္မာသည်၊ ကောက်ကျစ်သည်၊ ဖြောင့်မတ်သည်ကို သိရာ၏။
အနေအထိုင်ကို မြင်သဖြင့် ပေါ့တန်သည်၊ အမူအကျင့်ညံ့သည်၊ လောဘကြီးသည်ကို သိရာ၏။
ကြောက်၍ရိုသေခြင်းကို အလိုမရှိရာ၊ ချစ်၍ရိုသေခြင်းကို အလိုရှိရာ၏။
သူတော်ကောင်းကား ကုန်းစကားကို ယုံခဲ၏။
ဤသူများအား မိတ်မဖွဲ့ရာ အနီးကပ် မပေါင်းရာ။
မိုက်လွန်းလျှင်လည်း အရာမရောက် ပျက်တတ်သည်။
လိမ္မာလွန်းလျှင်လည်း အရာရောက်လွန်း၍ ပျက်တတ်သည်။
နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် ပြုတတ်မှသာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်။
ချီးမွမ်းတတ်မှ ပညာရှိ ပီသသည်။
ဆရာကို ရှေ့တွင်ပင် ချီးမွမ်းရာ၏။
မိတ်ဆွေကို ကွယ်ရာမှာ ချီးမွမ်းရာ၏။
အမှုထမ်းကို လုပ်ကိုင်စဉ်မှာ ချီးမွမ်းရာ၏။
ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ ဂုဏ်သတင်းကို စောင့်ရှောက်ရာ၏။
ကိုယ်ကား အသက်မဲ့သော် မတည်နိုင်၊ ပျောက်ပျက်ရာ၏။
ဂုဏ်သတင်းကား ဥဒါန်းမကျေ ရှိရာ၏။
သူယုတ်ကို အကျွမ်းဝင်သောနေ့သည် သေသောနေ့မည်၏။
ပညာရှိသူတော်ကောင်းနှင့် ကျွမ်းဝင်ရသော်နေ့သည် အသက်တစ်ဖန် ပြန်ရှင်သောနေ့ မည်၏။
ဆိုလွယ်ပြုလွယ်ခြင်းကား မှားခဲ့သော် လုံးလုံးမှားရာ၏။
ဆိုခဲပြုခဲသော် မှားသော်လည်း လုံးလုံးမမှားပေ။
တွေးတောခြင်းသည် စိတ်ပျံ့လွင့်မှုတစ်မျိုးသာ ဖြစ်သည်။
ဆင်ခြင်မှုသည် တွေးတောခြင်းနှင့် တခြားစီ ဖြစ်၏။
တွေးတောရာတွင် ပညာမယှဉ်သည်က များသည်။
ဆင်ခြင်မှုသည် တွေးတောခြင်းကဲ့သို့ ရောက်တတ်ရာရာ အာရုံပြုရာနောက် မလိုက်ပါ။
တစ်ခုသော အရာကိုသာ အာရုံပြု၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ စိစစ်ခြင်းသည်ပင် ဆင်ခြင်မှု ဖြစ်သည်။
မြွေအဆိပ်သည် အစွယ်မှာ ရှိသည်။
ကင်းမြီးကောက်အဆိပ်သည် အမြီးမှာ ရှိသည်။
မိန်းမယုတ်၏အဆိပ်သည် နှုတ်ဖျားမှာ ရှိသည်။
လူယုတ်မာတို့၏ အဆိပ်သည်ကား ကိုယ်၊ နှုတ်၊ နှလုံး သုံးပါးလုံးတွင် ရှိသည်။
“အဘိုးရာဇာ၊ လူတို့တွင်မိကောင်း၊ ဖကောင်း သားသမီးကား ဖြစ်လွယ်၏”။
“သားကောင်းသမီးကောင်းတို့၏ မိဘမူကား အလွန်ပင် ဖြစ်ခဲသည် မဟုတ်တုံလော”ဟု မင်းကြီးခေါင်မှ မေးတော်မူ၏။
↑ ရင်နှစ်သည်းချာ နိုင်ငံရတနာ ဆုံးမစာများ - အခြေခံပညာဦးစီးဌာန (ဒုတိယအကြိမ် ed.)။ ၁၈၁-၁၈၃၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့: မြဝတီပုံနှိပ်တိုက်၊။ စက်တင်ဘာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်။ pp. ၁၅၀။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)CS1 maint: location (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဏိရတနာ_နီတိများ&oldid=637398" မှ ရယူရန်
Wikiquote သို့ ကူးယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။